Neodymium nju (akpọkwara Igwe Ọdụdọ "NdFeB", "Neo" ma ọ bụ "NIB") bụ ihe ndị na-adịgide adịgide na-adịgide adịgide nke neodymium, iron na boron alloys. Ha bụ akụkụ nke usoro nju ala ụwa dị ụkọ ma nwee ihe ndị magnetik kachasị elu nke ihe ndọta niile na-adịgide adịgide. N'ihi oke ike ndọta ha na ọnụ ala dị ala, ha bụ nhọrọ mbụ maka ọtụtụ ndị na-azụ ahịa, azụmaahịa, ngwa ọrụ na teknụzụ.
A na-ahụta ihe ndị dị na Neodymium dị ka ndị siri ike n'ihi na ha na-eju afọ ma na-eguzogide demagnetization. Ọ bụ ezie na ha dị oke ọnụ karịa ihe seramiiki magnetik, ihe nrịba neodymium nwere mmetụta dị ike! Otu uru dị ukwuu bụ na ịnwere ike iji obere obereNdets NdFeBiji mezuo otu ebumnuche ahụ dị ka nnukwu magnet. Ebe ọ bụ na ọnụọgụ nke ngwaọrụ ahụ dum ga-ebelata, ọ nwere ike ibute mbelata ego zuru ezu.
Ọ bụrụ na akụrụngwa anụ ahụ nke neodymium magnet na-agbanwe agbanwe na enweghị ike imetụta demagnetization (dị ka nnukwu okpomọkụ, ntụgharị ndọta, radieshon, wdg), ọ nwere ike ida ihe na-erughị 1% nke njupụta magnetik n'ime afọ iri.
Neodymium ndọta na-ukwuu na-erughị emetụta cracks na chipping karịa ndị ọzọ obere ụwa magnetik ihe (dị ka Sa cobalt (SmCo)), na ọnụahịa dịkwa ala. Otú ọ dị, ha na-enwe mmetụta nke okpomọkụ. Maka ngwa dị oke egwu, S cobalt nwere ike bụrụ nhọrọ ka mma karịa n'ihi na ihe magnetik ya kwụsiri ike na okpomọkụ dị elu.
Enwere ike iji akara N30, N35, N38, N40, N42, N48, N50 na N52 maka NdFeB magnet nke ụdị na nha niile. Anyị na-echekwa ihe ndị a na diski, mkpanaka, ngọngọ, mkpanaka na ọdịdị mgbanaka. Ọ bụghị ihe niile neodymium magnets na-egosipụta na weebụsaịtị a, yabụ ọ bụrụ na ịchọtaghị ihe ịchọrọ, biko kpọtụrụ anyị.